Ukwehla kwesisindo - Cmoapi
Ungenza amaphilisi okunciphisa isisindo athenge ezitolo eziku-inthanethi. Lapho inhloso yakho ukwehlisa amakhilogremu athe xaxa ngenxa yokukhuluphala, ungabheka amaphilisi wokwehlisa isisindo （Orlistat / Cetilistat） athengiswa ku-inthanethi. Kodwa-ke, ungadinga incwadi kadokotela ngenxa yemihlahlandlela eqinile ye-FDA.
Uma ufuna amaphilisi okunciphisa umzimba, kufanele ubheke ne-CMOAPI ukuthola ukutholakala okuvumelekile kwemikhiqizo emsulwa. Izinhlanganisela zethu zithole isiqinisekiso sekhwalithi.
Imibuzo Evame Ukubuzwa FAQ
Uma kungekho mafutha kokunye kokudla kwakho, noma uma uphuthelwa ukudla, asikho isidingo sokuthi uthathe umthamo we-orlistat.
Ngithatha ama-orlistat amangaki ngosuku?
I-Orlistat ivame ukuthathwa izikhathi ezingama-3 ngosuku ngesidlo ngasinye esiyinhloko esiqukethe amafutha (angadluli kuma-30% ama-calories alokho kudla). Ungaphuza umuthi ngokudla kwakho noma kuze kufike ehoreni elilodwa ngemuva kokudla.
Ungakwazi ukukhipha amafutha lapho udla i-Orlistat?
I-Orlistat ivimbela umsebenzi we-lipase. Uma uthatha lesi sidakamizwa ngokudla, cishe amaphesenti angama-25 wamafutha owadlayo awaphuliwe futhi aqedwa ngokuhamba kwamathumbu.
Ingabe i-orlistat inemiphumela emibi?
Imiphumela emibi ebikwa ngokujwayelekile ye-orlistat ifaka phakathi: ukuphuthuma kwamathumbu, ukuhamba kwamathumbu kaningi, ukukhishwa okunamafutha, ukuvuza okune-oily rectal, i-steatorrhea, kanye ne-flatulence ngokukhipha.
Ungathatha i-2 orlistat ngasikhathi sinye?
I-Orlistat isebenza kuphela uma kunamafutha kokudlayo, ngakho-ke uma uphuthelwa ukudla noma uma udla ukudla okungenamafutha ungathathi umthamo we-orlistat. Uma ukhohlwa ukuthatha umthamo, ungakhathazeki; vele uthathe i-capsule ngesidlo sakho esilandelayo njengenjwayelo. Ungathathi imithamo emibili ndawonye ukwenzela umthamo okhohliwe.
Yikuphi i-orlistat engcono noma i-Xenical?
Umehluko phakathi kwe-orlistat ne-Xenical ngukuthi i-orlistat inguhlobo lomuthi ojwayelekile, kuyilapho i-Xenical ibhalwe uphawu. Lokho kusho ukuthi iXenical ibiza kakhulu kune-Orlistat futhi yaziwa kangcono njengethebhulethi yokwehlisa isisindo. I-Xenical kufanele ithathwe ngendlela efanayo ne-orlistat.
I-Orlistat ayihlangani notshwala, ngakho-ke kuphephile ukuphuza utshwala ngenkathi uthatha i-Orlistat. Kodwa-ke, utshwala bunama-calories amaningi. Ngenxa yalokho, ukuphuza utshwala ngenkathi uthatha i-Orlistat kungavimbela uhambo lwakho lokwehlisa isisindo. Ukuthola izeluleko ezithe xaxa zendlela yokwenza i-Orlistat isebenzise kahle ukudla kwethu kwe-Orlistat
Ingabe i-orlistat iyayithinta inzalo?
Eqenjini le-orlistat, ukuthuthuka okuphawulekayo kubonwe kuphrofayli ye-lipid ekupheleni kwezinyanga ze-3. Amanani wokukhulelwa kwakungu-40% no-16.7% no-3.3% ku-orlistat, iqembu le-metformin neqembu lokulawula ngokulandelana (P - 0.003). Ukwehla kwesisindo kutholakale njengesibikezelo esihle kakhulu se-ovulation ngokuzwela ngokuzwela okuhle.
Ngingathatha i-orlistat kanye ngosuku?
Umthamo ojwayelekile iphilisi elilodwa - 120 mg, kathathu ngosuku ngesidlo ngasinye. Kodwa-ke, awudingi ukuthatha elilodwa uma kungekho mafutha esidlweni noma uma uphuthelwa ukudla.
U-Alli uxhunyaniswe nokulimala okukhulu kwesibindi ezimweni ezingavamile, yize kwenzeke kakhulu kulabo abathatha umthamo wamandla kadokotela (i-Xenical). Yeka ukuthatha u-Alli bese ufonela udokotela wakho ngokushesha uma uba nezimpawu zalesi sifo.
Ingabe i-orlistat iphakamisa umfutho wegazi?
I-Orlistat igqugquzela ukulahleka kwesisindo okunempilo emitholampilo okuhambisana nokwehliswa okukhulu kwengcindezi yegazi nokushaya kwenhliziyo, ngakho-ke kungaba nendima ekuphathweni komfutho wegazi ophezulu ezigulini ezikhuluphele kakhulu nezikhuluphele ngokweqile.
Ngabe i-orlistat ingadala izinkinga zezinso?
I-Orlistat iyi-inhibitor ye-gastric ne-pancreatic lipase enamandla afakazelwe ekwandiseni nasekugcinweni kokuncipha kwesisindo. Yize ukusetshenziswa kwayo kunqunyelwe yimiphumela emibi kodwa enobungozi emathunjini, isanda kuhlotshaniswa nokulimala kanzima kwezinso (i-AKI).
Ingabe i-orlistat iyalutha?
I-Orlistat iyi-pancreatic lipase inhibitor futhi ivimbela ukumunca amafutha endaweni yokugaya ukudla. Ngoba ayithinti uhlelo oluphakathi lwezinzwa, i-orlistat kungenzeka ingabi nezici zokulutha.
Ngabe i-Orlistat FDA ivunyelwe?
I-Xenical (orlistat 120mg) yamukelwa njengomkhiqizo kadokotela yi-FDA ngo-1999 yokuphathwa kokukhuluphala ngokuhlangana nokudla okuncishisiwe kwekhalori, nokunciphisa ubungozi bokuthola isisindo ngemuva kokuncipha kwangaphambilini.
Uyithatha kanjani i-orlistat 120 mg?
Umthamo ojwayelekile we-Orlistat ungomunye we-120 mg capsule othathwe ngakunye kokudla okuyinhloko okuyisithathu ngosuku. Ingathathwa ngokushesha ngaphambi, ngesikhathi sokudla noma kuze kufike ehoreni elilodwa ngemuva kokudla. I-capsule kufanele igwinywe ngamanzi.
Ngabe i-orlistat ingadala ukuzuza kwesisindo?
Ukwehla kwesisindo esiningi ngenxa ye-Orlistat kwenzeka ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zokuphuza umuthi. Uma uthatha isinqumo sokuyeka ukusebenzisa i-Orlistat yokwehlisa isisindo, kufanele uqhubeke nokudla okunempilo nokuzivocavoca umzimba njalo. Kodwa-ke, ungahle uthole ukuzuza kwesisindo ngemuva kwalokhu.
Ungashesha kangakanani ukunciphisa isisindo nge-orlistat?
I-Orlistat (igama lomkhiqizo: alli) ngumuthi ovunyelwe we-OTC we-FDA ongasiza abantu abadala abakhuluphele ukunciphisa isisindo. I-Orlistat isebenza ngokuvimba amanoni ukuthi angangeni emzimbeni ngemuva kokudliwa ngesikhathi sokudla. Cishe amaphawundi ama-5 kuye kwayi-10 angalahleka phakathi nezinyanga zokuqala eziyi-6 zokusetshenziswa kwe-orlistat.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi u-alli aqale ukusebenza?
Kufanele ngilindele ukubona imiphumela engakanani emva kokuthatha ama-alli® capsules? Uma ulandela ikhalori elincishisiwe, ukudla okunamafutha amancane, thola ukuvivinya umzimba njalo, futhi uthathe ama-alli® capsules njengoba kuqondisiwe, ungabona imiphumela emasontweni amabili okuqala. Ukwehla kwesisindo esiningi kuvame ukwenzeka ezinyangeni eziyisithupha zokuqala.
Ingabe i-orlistat icindezela isifiso sokudla?
I-Orlistat (i-Xenical) isidakamizwa esinqunywe yi-GP yakho. Yenzelwe ukusiza ukulahlekelwa isisindo. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ngokusebenzisa i-Orlistat, kanye nokudla okunempilo nokuvivinya umzimba, kukhona ukwanda kwesisindo. Ayithathi indawo yokudla noma yokuzivocavoca futhi ayicindezeli isifiso sakho sokudla.
Ingabe i-orlistat iyasebenza ngempela?
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi, ngokwesilinganiso, i-orlistat, kanye nokudla okunciphisa isisindo nokuzivocavoca umzimba, kubangela ukwehla kwesisindo okuningi kunokudla okunciphisa isisindo nokuzivocavoca umzimba kukodwa. Abanye abantu balahlekelwa yi-10% noma ngaphezulu yesisindo somzimba wabo ezinyangeni eziyisithupha ngosizo lwe-orlistat. Kwabanye, akusebenzi kangako.
Ngabe i-orlistat ingadala i-pancreatitis?
Iziphetho Imibiko yethu iphakamisa ukuthi i-orlistat ingadala ukuthi i-pancreatitis ibangelwe yizidakamizwa ezigulini ezithile. Ezigulini ezethula ngobuhlungu besisu ngemuva nje kokuqala i-orlistat, ukuxilongwa kwe-pancreatitis kufanele kubhekwe. Sincoma nokusetshenziswa ngokucophelela kwe-orlistat ezigulini ezisengozini yokulimala kwepancreatic.
Yisiphi isikhathi esihle kakhulu sokuthatha i-orlistat?
I-Orlistat iza njenge-capsule kanye ne-capsule engabhalwanga ukuthatha ngomlomo. Imvamisa kuthathwa kathathu ngosuku ngesidlo ngasinye esiyinhloko esiqukethe amafutha. Thatha i-orlistat ngesikhathi sokudla noma kufika ehoreni elilodwa ngemuva kokudla. Uma ukudla kuphuthelwe noma kungenawo amafutha, ungeqa umthamo wakho.
Ungalahlekelwa isisindo esingakanani ngenyanga uma ukhuluphele?
Lokho kusho ukuthi, ngokwesilinganiso, lokho okuhlose ukuthola amakhilogremu ama-4 kuya kwangu-8 okunciphisa umzimba ngenyanga kuyinjongo enempilo. Ngoba kungenzeka ukuthi ulahlekelwe okuningi, okungenani ezinyangeni zokuqala zokudla, akusho ukuthi kunempilo noma ukuthi isisindo sizohlala isikhathi eside.
Kungani u-oyela we-poop orange lapho uthatha i-Orlistat?
Njengoba uwoyela umncane kakhulu kunamanzi, lokhu kuhamba kwamathumbu kuzovela endlini yangasese njengamafutha e-orange ahlala ngaphezu kwamanzi. Abanye abantu bangachaza iphunga le-keriorrhea njengalelo lamafutha amaminerali aqinile. Kwesinye isikhathi, umuntu angadlulisa indle eceleni kukawoyela.
Imibuzo Evame Ukubuzwa Cetilistat
ICetilistat, eyaziwa nangamagama womkhiqizo i-Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat umuthi omusha wokwehlisa isisindo.
Kungani Sidinga iCetilistat?
ukukhuluphala ngokweqile yisifo esidlanga kakhulu sokudla okunempilo emhlabeni wonke. Wonke umuntu angahle angayiboni imiphumela ngokuvivinya umzimba nokudla okuhlanzekile; yingakho kungadingeka ukuthi usebenzise i-Cetilistat ukulwa nokukhuluphala.
Ngabe isebenza kanjani iCetilistat?
ICetilistat isebenza ngokuvimba ukuwohloka nokumuncwa kwamafutha. Lokhu ikwenza ngokuvimbela ukwakheka kwe-pancreatic lipase umsebenzi wayo ukudiliza i-triglycerides emathunjini. Lapho ama-triglycerides engakwazi ukumuncwa njengamafutha acid emzimbeni, ayahamba. Ngenxa yalokho, kuncishiswa amandla okudla okuholela ekwehliseni isisindo.
Izinzuzo zeCetilistat kanye Nokulahlekelwa Isisindo
1.Kusiza ukuthi wehlise isisindo ugcine indlela yokuphila enempilo, ikusiza ekugcineni i-BMI enempilo.
Ihlinzeka ngemiphumela esikhathini esifushane, iCetilistat ikunikeza lowo mzimba webikini phakathi kwamasonto ayishumi nambili.
Ungayisebenzisa Kanjani Cetilistat
Imvamisa, i-Cetilistat powder ithengiswa ngendlela yamaphilisi we-60mg athathwa ngomlomo. Abanye abantu bazokhetha ukuyithatha ngemuva kwesikhathi sokudla, kepha akufanele neze weqe isikhathi sehora sokudla.
Ngabe iCetilistat iyasebenza?
ICetilistat nayo iyisidakamizwa sesikhashana futhi kungenzeka ingabi yiyona engcono kakhulu yokulawula isisindo impilo yakho yonke. Uma kungenzeka isetshenziswe isikhathi eside kakhulu, ingaholela ekubeni umlutha kanye nezinkinga zamathumbu.
I-Cetilistat, nokho, ibonakala ibekezelelwa ngendlela engcono uma iqhathaniswa nezinye izidakamizwa zokwehlisa isisindo njenge-Orlistat.
Ngubani Ongasebenzisa ICetilistat?
I-BMI yakho ingaphezu kwama-27, futhi uhlushwa inkinga yezempilo ehlobene nokukhuluphala efana nomfutho wegazi ophakeme nesifo sikashukela.
I-Cetilistat Side Effects
Iningi lemiphumela emibi yeCetilistat yi-gastro nokugaya okuhlobene.
Ukwehliswa kwamazinga kavithamini E no-D, ukungasebenzi kwe-Fecal, ukuphuthuma kwe-defecation, ukukhishwa kwe-Rectal, izihlalo ezinamafutha, indle ye-oily.
Kwenzekani Uma UMiss Dose weCetilistat?
Uma uphuthelwe umthamo, kunezinto ezimbili okufanele uzicabangele; ufika sekwedlule isikhathi esingakanani nokuthi uhlelo lwakho olulandelayo lube nini. Uma kwenzeka ukhumbula ukuthi uphuthelwe umthamo nje, thatha ngokushesha nje lapho uqaphela.
Uma uhlelo lwakho olulandelayo lusondele kakhulu, weqa umthamo we-Cetilistat ongabanjwanga bese uqalisa kabusha uhlelo lwakho ejwayelekile lokudosa. Ungalokothi usebenzise umthamo owengeziwe ukwenza umthamo owuphuthelwe, ngoba lokhu kuzoholela nje ekwengeni ngokweqile. Uma uzizwa njengokukhumbula ukuthi uzithatha nini izidakamizwa zakho ziba ngumsebenzi, ungahlala usethe i-alamu noma ucele omunye wabangani bakho noma amalungu omndeni ukuthi akukhumbuze.
yini umehluko cetilistat ne-orlistat？
Ukwelashwa nge-orlistat kuphinde kuhlotshaniswe nemicimbi eminingi yamathumbu (AEs) ekhula kakhulu phakathi kweziguli ezingahambisani nokudla okunamafutha aphansi okunconywayo. I-Cetilistat iyisithiyo se-pancreatic ne-gastrointestinal lipases, futhi ihluke ngokwamakhemikhali ku-orlistat.